မျက်နှာပြင်ပရင်တာစက်ရုံ | China Screen Printer ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-577-66688057
စက္ကူ Core ဖြတ်စက်
ပြား mounting စက်
Convert & ပြီးပြီဖြေရှင်းချက်
စက္ကူ Straw စက်
Atlas320-5D Flexo ပုံနှိပ်စက်
Atlas320-5B Flexo ပုံနှိပ်စက်
Smart-340 ယူနစ်အမျိုးအစား ၆ အရောင်များ Flexograph ပုံနှိပ်ခြင်း ...
Smart-340 Servo Flexographic စာနယ်ဇင်း
ADS-280AHLI အပြည့်အဝအော်တိုမြန်နှုန်းမြင့် Oblique အမျိုးအစား Multi-Function Label ပုံနှိပ်စက်
1. Cllin Shell လှုပ်ရှားမှုကိုအမြဲတမ်းပေးစွမ်းနိုင်သည့် Oblinque March စနစ်ဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။ 2. လေးလံသောအစိုင်အခဲပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျဉ်းမြောင်းသောစကားလုံးများကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ pre-prnting အလုပ်အတွက်အလျင်အမြန်နှင့် esay set-up, သူကစမ်းသပ်ခြင်း -running ပစ္စည်းများဆုံးရှုံးမှုလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်မွတ်သိပ်ခြင်းအတွက်တံဆိပ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ; shilled operaton ၏ရှားပါးမှုကိုဖြေရှင်း 4.Easy စစ်ဆင်ရေး; ၅။ ပုံနှိပ်ခြင်းအမြန်နှုန်းသည် ၅၀-၁၇၀ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှု / မိနစ်နှင့်ကွာနိုင်သည်။ 6.Dre- ဖြတ်တောက်ခြင်းခေါင်းအစာရှောင်ခြင်းမှတ်ပုံတင်ရှိသည်ဖို့ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်သီးခြားဖြစ်။ , ၇ ။
နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ ADS-360D Max.print area 360 × 500mm မျက်နှာပြင်ဘောင်အရွယ်အစား 560 × 800mm Max.paper width 360mm Max.paper Forward 500mm ပုံနှိပ်ခြင်းနှုန်း / rph 0-8000mm စက်တိကျမှု± 0.1mm စက်အရွယ်အစား （L × W × H） 5360 × 1270 × 1700mm စက်အလေးချိန် （စုစုပေါင်း） 4800kgs တစ်ခုမီးခွက်ခရမ်းလွန်အရွယ်အစား （L × W × H） L.570 × W.200 × H.295mm နှစ်ဆမီးခွက် UV အရွယ်အစား （L × W × H） L.570 × W.360 × H.295mm ခရမ်းလွန်အခြောက်ခံစက် （စုစုပေါင်း） ၄၀၀kgs
ADS-1030 Monochrome ဖန်သားပြင်ပုံနှိပ်စက်
နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ ADS-1030 ADS-2030 Max ။ ပုံနှိပ်Areaရိယာ 400 × 280mm 400 × 280mm ပုံနှိပ်အမြန်နှုန်း 5m / min / တိပ်ပုံနှိပ်အရောင် 1color 2colors ပါဝါ 380V / 4KW 380V / 6.6KW စက်အလေးချိန် 500KG 900KG စက်အရွယ်အစား （L × W × H） 300 × 80 × 150mm 520 × 80 × 150mm
ADS-3004 အပြည့်အ ၀ အလိုအလျောက်အရောင်လေးရောင်တံဆိပ်ပုံနှိပ်စက်
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အရောင်အသွေးစုံလင်သောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလတ်စားမျက်နှာပြင်စက်၏အလုပ်လုပ်ခြေလှမ်းများအလွန်ရှင်းပါတယ်။ အနည်းဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများသာရှိပြီးစီးပွားရေးနှင့်လျင်မြန်စွာပြီးစီးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် servo အစာကျွေးခြင်း၊ မြင့်မားသောအရောင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လေကြောင်းလိုင်း၏လွှမ်းမိုးမှုမရှိခြင်း၊ နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ ADS-3004 Max ။ ပုံနှိပ်Areaရိယာ 800 × 280mm 800 × 280mm 800 × 280mm 800 × 280mm ပုံနှိပ်အမြန်နှုန်း 300-1500 p / hor3...
ADS-5080C အဆုတ်အမျိုးအစား Single- အရောင်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်စက်
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ ADS-5080C Max.print 500ရိယာ 500 × 800mm မျက်နှာပြင်ဘောင်အရွယ် 600 × 1100mm Max.paper width 520mm Max.paper Forward 800mm ပုံနှိပ်ခြင်းမြန်နှုန်း / rph ၀.၇၀၀၀ မီလီမီတာစက်တိကျမှု± 0.1mm စက်အရွယ်အစား （L × W × H） 3500 × 1300 × 1750mm စက်အလေးချိန် （စုစုပေါင်း） ၂၃၀၀ ကီလိုဂရမ် ၄၅ မီလီမီတာ - ခြောက်သွေ့သော box အရွယ်အစား （L × W × H） 2230 × 1020 × 2050mm 45m - ခြောက်သွေ့သော BOX အလေးချိန် oss စုစုပေါင်း） 1300kgs
လိပ်စာ: ၄ ထပ်၊ အမှတ် ၄၂၈ Wenzhou ရိပ်သာလမ်း၊ Puzhou လမ်း၊ Longwan၊ တရုတ်၊ Wenzhou၊
ဖုန်း + 86-577-66688057